बम्जनको आश्रममा आफन्त खोजिनुको गहिराइमा जानु्पर्छ –डा डी आर उपाध्याय
केही वर्षअगाडि बुद्धको अवतारका रुपमा चर्चा पाएका रामबहादुर बम्जन एक पटक फेरि चर्चित हुने भएका छन् । तर यस पटकको परिस्थिति विपरीत अर्थमा खडा हुने देखिन्छ । रामबहादुर बम्जनको आश्रमबाट आफ्ना मान्छे हराएको गुनासो पोख्दै हराएको भनिएका परिवारका आफन्तले आफ्ना मान्छेको खोजी गरिदिन राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । रामबहादुर बम्जनका प्रशंसक र अनुयायीहरु छन् भने उनी पटकपटक आलोचित पनि भएका छन् र उनको व्यवहारप्रति अनेकौं आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएअनुसार, मकवानपुर जिल्लाकी एक आनी र एक भिक्षु, सर्लाही तथा नुवाकोटका एक–एक आनी हराएको भन्दै बम्जनविरुद्ध प्रहरीमा उजुरीसमेत दर्ता भइसकेको छ । नुवाकोट जिल्लाको म्यागङ गाउँंपालिका–३ देउरालीकी गंगामाया तामाङ दुई वर्षयता आफ्नी साहिंली बैनी कर्मा भनिने चिनिमाया तामाङलाई खोजिरहेकी छन् । उनी कहाँं छिन् ? कहाँं गइन् ? जीवित छन् कि छैनन् ? यस प्रश्नको जवाफ गंगामायाले न बम्जनबाट पाएकी छन् न आश्रममा रहेका व्यक्तिहरुबाट ।
गंगामायाका अनुसार, २०६८ सालदेखि बम्जनको आश्रममा लागेकी उनकी बैनी २०६९ सालमा एक पटक घर आएकी थिइन् । केही दिन बसेर फेरि उनी आश्रममै फर्केकी थिइन् । त्यसपछि उनी घर आएकी छैनन् । उनले फोन वा अन्य माध्यमबाट घरपरिवारसँंग सम्पर्क पनि गरेकी छैनन् । बैनी हराएपछि गंगामाया उनलाई खोज्न आश्रमलगायत चारैतिर चहारिन् तर केही खबर पाइनन् । ललितपुरको बुङमतीमा भेटिएका बम्जनका अनुयायीले चिनिमायालाई गुप्तचरको आशंकामा आश्रमबाट निकालिएको बताएको गंगामायाले सुनाइन् । गंगामायाले आफ्नी बैनीजस्तै अरु थुप्रै आनी बम्जनको आश्रमबाट हराएको खबर सुनेपछि चिन्ता झनै बढेको बताइन् ।
यस्तै बम्जनको अनुयायी बनेर वषौं उनकै आश्रममा बिताएका अन्य चेली पनि सम्पर्कमा नभएको गुनासो आएको छ । ती सबैको परिवार पनि चिन्तित छन् । मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१६का वीरबहादुर रुम्बाकी छोरी फूलमाया २०६८ सालमा बाराको हलखोरिया जंगलमा तपस्यारत भनिएका रामबहादुर बम्जनबाट प्रभावित भइन् । त्यसपछि आनी बनेर उनकै पछि लागिन् । अहिले उनका बुबा तीन वर्षयता छोरी हराएको भन्दै उनको खोजीमा रहेको बताउँंछन् । फूलमायाका दाजु विजय रुम्बाले पनि पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नी बैनी हराएकोबारे चिन्ता व्यक्त गरे । हेटौंडा –१३ का महेन्द्र वाइबा पनि साढे दुई वर्षयता हराएका बुबाको खोजीमा छन् । उनका बुबा सन्चलाल तामाङले बम्जनको बारा हलखोरियास्थित आश्रममा केही समय बिताएका थिए ।
रामबहादुर बम्जन, उनको आश्रम वा उनका अनुयायीहरुप्रति कुनै नकारात्मक चिन्तन उत्पन्न गर्ने यस पंक्तिकारको लेशमात्र मनसाय होइन । तर विश्वमा धर्मको आवरणमा भइरहेका गरिएका अनेकौं अमानवीय कृत्यको चर्चा गर्नु यहाँं प्रासंगिक भएको महसुस गरेर केही कटु उदाहरण दिनु आवश्यक छ । हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका चर्चित सन्त–स्वामीहरु आशाराम तथा उनका पुत्र, रामपाल जी, रामरहीम लगायतहरुले धर्मको आडमा हत्या र बलात्कार गरेको जेजस्तो अभियोगमा जेलसजाय भोग्नुपरिरहेको छ त्यसले सरकारका साथै सर्वसाधारणलाई समेत गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । बम्जनको आश्रममा गएकाहरु लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन हुनुको कारण सम्पूर्ण साधनस्रोत उपयोग गरेर तदारुकताका साथ पत्ता लगाएर सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । धर्म र ईश्वरप्रतिको भक्ति भाव एवं आस्थाको दुरुपयोग गर्न खोज्ने जोसुकैलाई कठोरभन्दा कठोर दण्ड दिन कसैले पनि खुट्टा कमाउनु हुँंदैन । कुनै ढिलासुस्ती नगरी रामबहादुर बम्जनको आश्रममा आफन्त खोजिनुको गहिराइमा जानुपर्छ ।
–२०७५ पुस १५